မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ: Ceiling Plaster Board Installation နဲ့ Conquas အကြောင်း
Ceiling Plaster Board Installation နဲ့ Conquas အကြောင်း
Ceiling Plaster Board Installation
Main Contractor မှပေးထားသော အဆောက်ဦးအနိမ့်အမြင့်ထိန်းချုပ်မှုမျဉ်း 1 Meter Datum Level (One Meter Line) ကိုအခြေပြု၍ လိုအပ်သော မျက်နှာကြက်အမြင့် Ceiling Height အားတိုင်းတာမှတ်သားပေးရပါမယ်။
လိုအပ်သော မျက်နှာကြက်အမြင့်အား ရေချိန်၊ လေဆာသုံးအမြင့်တိုင်းကရိယာ Laser Beam Level ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်အမြင့်တိုင်းကရိယာ Dumpy Level ကိုအသုံးပြု၍ မျက်နှာကြက်ပြား Ceiling Boards နဲ့ အချောသတ်ပတ်တီး Stopping Compound အထူအားထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မှတ်သားပေးရပါမယ်။ မျက်နှာကြက်ပြားအား ဝက်အူစုပ် Screw ပေးရမယ့် သွပ်ရည်စိမ်သံပြား L-Channel Galvanized Iron လိုင်းရိုက်ရန် မျဉ်းကြောင်းပေးရပါမယ်။
One Meter Line လို့အလွယ်တကူခေါ်နေကြတဲ့ အဆောက်ဦးအနိမ့်အမြင့် ထိန်းချုပ်မှုမျဉ်းဟာ အချောထည်လုပ်ငန်း Architectural/Finishing Trades အတွက်အလွန်အင်မတန်မှ အရေးပါပြီး သူ့အပေါ်တွင် Trades အားလုံးကတည်မှီနေရပါတယ်။ ကွန်ကရစ်အကြမ်းထည် ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင် Structural Level ဟာများသောအားဖြင့် ပုံမှာပေးထားတဲ့အတိုင်း ပုံမှန်ရှိမနေပဲ အချောသတ် ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင် Finishing Floor Level မှသာ ပုံတွင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျညှိယူပါတယ်။ One Meter Line ကတော့ FFL မှတိုင်းတာပါက တစ်မီတာအကွာဝေးမှာရှိတဲ့ လိုင်းအမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Wall Angle လို့ခေါ်တဲ့ (25x25x0.4mm) သွပ်ရည်စိမ်သံပြားအား အုတ်ရိုက်သံ Concrete Nails ဖြင့် 300mm C/C အကွာအဝေးခြားကာ တပ်ဆင်ပေးရပါမယ်။ Wall Angle အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ဟာ သွပ်ရည်စိမ်သံပြားလိုင်းနဲ့ တပြေးညီရှိနေရပါမယ်။ Wall Angle တွေဟာ မျက်နှာကြက်ထားရှိမယ့် နေရာအလိုက် နံရံပတ်ပတ်လည်တွင် တပ်ဆင်ပေးရပါမယ်။
C-Channel Hangers (35X15X0.4mm) များအား Power Fixed Fasteners ကိုအသုံးပြု၍ Top Battens အတွက် 1000mm၊ Furring Battens အတွက် 450mm ထက်မပိုစေဘဲ တပ်ဆင်ပေးရပါမယ်။
Galvanized Furring Channel (35X15X0.4mm) အား Wall Angle အပေါ်တွင် 600mm အများဆုံးအကွာဝေးခြားကာ Galvanized Dry Wall Fasteners ဖြင့်တပ်ဆင်ပေးရပါမယ်။
Main Runner Battens အား 1200mm အများဆုံးအကွာဝေးခြားကာ ဘေးခြင်းကပ်လျက်ရှိသော Furring Channels အပေါ်တွင်သာမာန်သုံး Self Tapping Dry Wall Screw ဖြင့်ဝက်အူစုပ်ပေးရပါမယ်။
လိုအပ်သောမျက်နှာကြက်ကိုယ်ထည်စနစ် Suspension System အားတပ်ဆင်ပြီးပါက ရေချိန်မျဉ်းတံ Spirit Level အားအသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ညီညာမှု Horizontality ဖြစ်စေရန် ညှိပေးပါမယ်။
မျက်နှာကြက်ပြားမတပ်ဆင်မှီ Access Panel ရဲ့အနေထားအမှန်အား M&E Lay Out Drawing ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီး အဆင်ပြေမှသာတပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
မျက်နှာကြက်ပြားအား Furring Channels အောက်တွင်အလျားလိုက် ဝက်အူ (No. 8X25mm Self Tapping Screw) စွဲပေးရပါမယ်။ ထိုသို့ဝက်အူစွဲပေးရာတွင် မျက်နှာကြက်ပြားအလယ်မှာ အများဆုံး 300mm အကွာဝေးခြားပေးရပြီး အစွန်းနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ အလွန်ဆုံး 200mm ထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
မျက်နှာကြက်ပြားများ တခုနဲ့တခုကြားရှိဆက်ရာများအား Stopping Compound ပလာစတာဖြင့် အချောသတ်ပေးရပါမယ်။
မျက်နှာကြက်ပြားဆက်ရာများအား Square Trowel ဖြင့် ညီညာသောမျက်နှာပြင် Flush Surface ရရှိစေရန် အချောကိုင်ပေးသင့်ပါတယ်။
Stopping Compound ပလာစတာ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပေးရပြီး သုံးရက်လောက်ကြာမှ ဆေးစတင်သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဆေးစတင်မသုတ်ခင် Moisture Meter ဖြင့်မျက်နှာကြက်ပြားရဲ့ရေငွေ့စိုထိုင်းစ အားတိုင်းတာရပါမယ်။
မျက်နှာကြက်ပြားအထက်တွင်ရှိသော ရေမီးစမ်းသပ်မှု M&E Testing တွေပြီးမှသာ မျက်နှာကြက်ပြားဖုံးအုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် Ceiling Frame Works ကိုတော့ အရင်လုပ်ထားပြီး သက်ဆိုက်ရာနွားနဲ့အင်ဂျင်နီယာ Clerk of Works, Resident Engineer တွေရဲ့ ရေမီးစစ်ဆေးမှုပြီးစီးခြင်းမှတ်တမ်း M&E Clearance Form ကိုရယူပြီးမှသာ မျက်နှာကြက်ပြားဖုံးအုပ်ရပါမယ်။
CONQUAS – Architectural Works Quality Standard
မျက်နှာကြက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ Conquas သတ်မှတ်ချက်များကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
How to improve joints at wall & ceiling?
The gaps between the wall and the ceiling board shall be not more than 3mm, this would allow sufficient stopping compound to be retained in the gap forastronger finish.
နံရံနဲ့မျက်နှာကြက်ပြား ဆုံသောနေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောနေရာလပ်ဟာ 3mm ထက်မပိုသင့်ဘဲ Stopping Compound ဖြင့်ပိတ်ပေးရပါမယ်။
How to prevent over tightening of screw that would cause staining problem?
Battery operated hand drill is used to tight the screws, when the screw head reaches the board surface it will stop immediately and will not cause over tightening.
ဝက်အူစုပ်ရာတွင် အလွန်အမင်းတင်းကြပ်မနေသင့်ဘဲ ဝက်အူခေါင်း Screw Head နဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ပြေးညီ ဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။
How to distinguish moisture resistant fibrous plasterboard from normal fibrous plasterboard?
Moisture Resistant fibrous plasterboard is distinguished by the ‘Green’ paint sprayed on the edge and water could be splashed on it. Normal fibrous plasterboard is distinguished by the ‘Yellow’ paint sprayed on it edge.
Moisture Resistant/Normal Fibrous Plaster Board လို့ခေါ်တဲ့ ရေစိုခံ Waterproof နဲ့သာမာန်မျက်နှာကြက်ပြားတွေကို တချို့နေရာမှာအရောင်အမှတ်အသားဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး အလွယ်ကူဆုံးစစ်ဆေးနည်းမှာ မျက်နှာကြက်ပြားအပေါ်ရေဖြန်းကြည့်ပြီး ရေစိမ့်ဝင်ပါက ပုံမှန်မျက်နှာကြက်ပြားဖြစ်ပါတယ်။ Wet Area လို့ခေါ်တဲ့ ရေချိုးခန်း, မီးဖိုချောင်, ဝရန်တာ စတဲ့နေရာတွေမှာ ရေစိုခံမျက်နှာကြက်ပြား ကိုသုံးပြီး၊ Dry Area လို့ခေါ်တဲ့ ဧည့်ခန်း, အိပ်ခန်း, ထမင်းစားခန်း အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ သာမာန်မျက်နှာကြက်ပြား ကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
CONQUAS Trial Comments 1
Wall Defect Skimming Surface peeled off
CONQUAS Trial Comments 2
Wall Painting Inconsistence
CONQUAS Trial Comments 3
Beam Corner Edge minor chipped and Conquas point can be lost here
Conquas အမှတ်လျော့နိုင်တဲ့ အချောသတ်ပလာစတာ ပဲ့ထွက်ပြီး အနားများဖွာထွက်နေသော ပုံဖြစ်ပါတယ်။
CONQUAS Trial Comments 4
Uneven Plaster surface at corner of beam ceiling edge can lead to point lost
Conquas အမှတ်လျော့နိုင်တဲ့ ထောင့်ချိုးရှိပလာစတာအချောသတ် မညီညာဖြစ် နေသော ပုံဖြစ်ပါတယ်။
CONQUAS Trial Comments 5
Plaster surface to aluminium window frame finish not touch up properly can lead to lost point in Conquas inspection
Conquas အမှတ်လျော့နိုင်တဲ့ ပလာစတာမျက်နှာပြင်နဲ့ ပြတင်းတံခါးဘောင် ဆုံတွေ့သောနေရာတွင် မသေမသပ်နဲ့ အချောသတ်ထားပုံဖြစ်ပါတယ်။
CONQUAS Trial Comments 6
Ceiling hole to be properly protected
M&E Services ကြောင့်ဖြစ်သော မျက်နှာကြက်အပေါက်များအား သေသပ်စွာ ပတ်တီး Internal Putty ဖြင့် ပိတ်ပေးရပါမယ်။
CONQUAS Trial Comments 7
Access Panel dented and not level not acceptable as well as can lead to lost point in Conquas inspection
ရေချိန်မညီညာနဲ့ ပြေပြစ်မှုမရှိသော Access Panel တပ်ဆင်ထားသော ပုံဖြစ်ပြီး Conquas အမှတ်လျော့နိုင်တဲ့ အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မောင်သန်း at 9:10 PM
Aung Lin December 9, 2010 at 10:24 PM
Hi Ko Thant ,
You are the first blogger in RTO field among Myanmar Guys.
win December 12, 2010 at 12:39 AM
ye December 13, 2010 at 12:27 PM
thank you very much for your blog and contributions.